I-chic, ii-ambrellas eziqinileyo eziza kuba Nazo ukucula emvuleni
Kuyanetha, kunetha iikati kunye nezinja, umoya ovuthuzayo uvuthuze isambulela sakho ngaphakathi, kwaye ngoku unxilile. Nokuba yimvula ebandayo yasebusika okanye imvula efudumeleyo yehlobo, uya kufuna iambrela onokuxhomekeka kuyo ukugcina umzimba wakho womile.
Ukuba ufana nathi sonke, awusoloko ukhumbula ukubukela ingxelo yemozulu. Ke xa ujonge i-ambrela entsha, jonga elincinci elincinci, nelilula ukuze ukwazi ukulithwala ngamaxesha onke, nokuba imeko injani na. Iiambrellas ezilungileyo ziqinise iibambo kunye ne-airy canopies ezigoba kumoya womoya kwaye ziphephe ukuba ziiseyile ze-DE facto ezilungele ukukuhambisa. Ngoku, iinkampani ezininzi zibonelela ngepeylon yeepeyinti ukuze iindawo zazo zomile ngokukhawuleza kwaye unakho ukuthintela iipuddles ezimanzi phantsi kwezambrela. Uyilo lweambrela entsha ikwabandakanya ukhetho olungena ngaphakathi, lwangaphakathi: Ngale ndlela, indawo engaphandle emanzi yesambrela inokusongelwa kwaye iguqulwe ngaphakathi, ukugcina amanzi engena ngaphakathi, kude nemoto yakho, umgangatho kunye neempahla. Ezi zikhetho zingaphakathi zinokuma ngokwazo kwaye azidingi iiaracks okanye iiambrela.
Siqokelele iiambrellas ezifanelekileyo ukukugcina ungabi manzi kwisiphango esilandelayo. Jonga iinketho ezingezantsi ukufumana isitayile sakho osithandayo-kukho nobusuku obunomtya obonisa ukhuseleko! -Kwaye yongeza kwinqwelo yakho yokuthenga. Ixesha elizayo xa isibimo sezulu sitsho ngeshawa, uyakufumana into onokuyisebenzisa.
Umsebenzi wethu e-SheKnows kukuxhobisa nokukhuthaza abantu basetyhini, kwaye senza kuphela iimveliso esicinga ukuba uza kuzithanda njengoko sisenza. Nceda uqaphele ukuba, ukuba uthenga into ngokucofa ikhonkco kweli bali, sinokufumana ikhomishini encinci kwintengiso, kwaye umthengisi unokufumana idatha ye-accounting ephicothiweyo.
Ixesha lokuposa: ngoMeyi-20-2020